Matongerwo eNyika, 11 Kukadzi 2019
Muvhuro 11 Kukadzi 2019
Musangano weAfrica Union Unopetwa Sangano iri Risina Kuzeya Nyaya yeZimbabwe
Sangano reSADC ndiro rakazeya nyaya yeZimbabwe neMugovera parutivi rwemusangano weAfrican Union uyu, apo mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakapira kuvatungamiri venyika dziri muSADC mamiriro akaita zvinhu munyika.
Kukandirana Makobvu neMatete kwaVaMliswa naVaNduna Kunomisa Musangano weKomiti yeZvicherwa
VaMliswa, avo vanove sachigaro wekomiti iyi, vakambosuduruka kutungamira komiti iyi mushure mekunge paramende yati yave kuongorora nyaya dzehuwori dzavanonzi vakaita ivo nedzimwe nhengo nhatu dzekomiti iyi.
Chingwa Chotarisirwa Kushomeka Zvakanyanya Mushure Mekunge Hurumende Yadzikisa Mutengo
Gurukota rezvemaindustry VaNqobizitha Ndlovu vanoti hurumende ichabatsira vanobika chingwa nemari yekunze.
African Union Yotarisirwa Kupedza Musangano Wayo wePagore Nhasi
Mutungamiri wenyika yeEgypt VaAbdel-Fattah El-Sissi avo vakauya pachigaro vachiita zvekupidigura hurumende ndivo vakasarudzwa kuita sachigaro weAfrican Union vachitevedzerwa nemutungamiri weSouth Africa VaCyril Ramaphosa avo vachatora chigaro chekutungamira gore rinouya.
Kukadzi 10, 2019
African Union Yokurudzirwa Kunzwa mativi ose paNyaya yeZimbabwe
Musangano wevatungamiri venyika dzemu Africa, weAfrican Union wechimakumi matatu nembiri watanga muguta guru reEthiopia reAdis Ababa mutungamiri nyika VaEmmerson Mnangagwa vachipindawo mumusangano uyu.
Varairidzi Vanombomisa Kuramwa Mabasa Mushure meMusangano neHurumende
Izvi zvinotevera musangano wechimbichimbi waitwa nevamiriri vevaraidzi vemasangano ose evarairidzi negurukota rezvedzidzo yepasi Muzvinafundo Paul Mavhima masikati.